“အတွင်းသားအလှကိုပြပြီး ကြော့ကြော့မော့မော့ လမ်းလျောက်လာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်” ( ဗီဒီယိုဖိုင် ) - Myannewsmedia
“အတွင်းသားအလှကိုပြပြီး ကြော့ကြော့မော့မော့ လမ်းလျောက်လာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်” ( ဗီဒီယိုဖိုင် )
By SPACEPosted on July 18, 2019 July 19, 2019
နှ စ်ေ ပ .ါင်းအေ တာ်ြ ကာေ အာင်ြ မ င် စွာနဲ့ ရ ပ် တ ည်ေ န . နို င် တဲ့ မင်းသမီးချောလေး Thinzar Wint Kyaw က တစ်နေ့တစ်ခြား အောင်မြင်မှုတွေ များစွာ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူလေး တစ်ဦးပါ။ Thinzar Wint Kyaw ရဲ့ အလန်းစားဖက်ရှင်တွေကလည်း
ပရိ သ တ်ေ တွ စိ တ် ဝင် တ စားေ စာင့်ြ ကည့်ြ က တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အားပေးမှုကို ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ Thinzar Wint Kyaw က အားပေးသူ ပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့ အနုပညာလောကမှာ ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေ န့ က ဇူ လို င် လ ( ၁ ၇) ရ က်ေ န့ မှာေ တာ့ Thinzar Wint Kyaw က Gre eAir Conditioner ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းသစ် မိတ်ဆက်ပွဲကို တက်ရောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Thinzar Wint Kyaw က လှပတဲ့ အြ ဖူေ ရာင် ဝ တ် စုံ ပါး ပါးလေးကို ဝတ်ပြီး ပွဲတက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြူရောင်ဝတ်စုံ ပါးပါးလေးအောက်က ရ င် သ ပ် ရှုေ မာ . ဖွ ယ်ကောက်ေြ ကာင်းအလှကို ထင်ထင်ရှားရှားကြီး တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး Thinzar Wint Kyaw ကလည်း သူမရဲ့ အလှတွေကို လှစ်ဟပြီး ကြွကြွရွရွှနဲ့ လျှောက်လှမ်းလာခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
လှလိုက်တာ THINZAR WINT KYAW ရယ်
Thinzar Wint Kyaw က လ က် ရှိ မှာလဲြေ က်ာငြာဓာတ်ပုံလေးတွေကို ရိုက်ကူးပေးနေပြီး ပွဲအခမ်းအနားတွေကိုလဲ တက်ရောက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
Source: Thinzar Wint Kyaw’s Facebook |Reference & Credit : momolay.com
Previous post ပိတ်ကားထက်မှာ ပြန်လည်မြင်တွေ့ရတော့မယ့် ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ ထိုင်းမင်းသားချောများ
Next post အပျိုတွေဖြစ်ရက်နဲ့ အိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားကိုမှ စွဲလန်းကြရတဲ့အကြောင်းရင်း (၅) ချက်